घर बनाउने सपना, ‘गुरु’ ले पार्छ साकार - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
घर बनाउने सपना, ‘गुरु’ ले पार्छ साकार
महेश तिमल्सिना	|| 17 December, 2021
सहरमा घर । आममानिसको सपना हो । तर, निर्माण कसरी गर्ने ? यसले धेरैलाई हैरान पारेको हुन सक्छ । पैसा भएर पनि आफूले सोचेजस्तो घर नबनेपछि धेरै मानिसहरु पछुताउँछन् । यही भ्रम, पछुतो र दुविधालाई चिर्दै आएको छ–घर निर्माण गुरु ।
गुरु कुनै व्यक्ति नभएर कम्पनी हो । यो कम्पनीले घर निर्माणको सल्लाहका साथै निर्माणको समेत जिम्मा लिन्छ । घरको डिजाइन, नक्सा पास, निर्माण सामग्रीदेखि कामदारसम्मको ठेक्का यसैले लिन्छ । अनि घर सम्पन्न गरेर धनीलाई ताल्चा साँचो बुझाउँछ ।
गुरुले यतिबेला काठमाडौं उपत्यकालाई आफ्नो सेवा क्षेत्र बनाएको छ । करिव १० वटा घर निर्माण सम्पन्न गरी घरधनीलाई जिम्मा लगाइसकेको छ । व्यस्त समयका बाबजुद पनि सोचेअनुसारको घर निर्माण गर्न चाहनेले घर निर्माण गुरुको साथ लिनसक्ने मार्केटिङ प्रमुख प्रणयराज आचार्य बताउँछन् ।
‘हामीले जोसँग पैसा छ तर फूर्सद र आइडिया छैन उहाँहरुलाई लक्षित गर्दै यो कम्पनीको सुरुवात गरेका हौं,’ आचार्यले भने, ‘काठमाडौं उपत्यकामा घडेरी हुनेहरुले आफूले जस्तो घर बनाउन चाहेको हो त्यही अनुसार हामीले. घर बनाइदिन्छौं ।’
घर निर्माणको तीन प्याकेज
घर निर्माणका लागि कम्पनीले तीनवटा प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ । जसको पहिलो प्याकेज हो–बजेट प्याकेज । सानो घर अर्थात कम बजेट भएका मानिसका लागि यो प्याकेज उत्तम हुने घर निर्माण गुरुकी सिइओ म्रिडानी शर्मा पौडेल बताउँछिन् । प्याकेजमा प्रति स्क्वायर फिटको ३ हजार ५० रुपैयाँ लाग्नेछ । ‘घर सानै भएपनि सपना ठूलो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो,’ उनले भनिन्, ‘थोरै पैसामा घर बनाउने चाहना राख्नेहरुको सपना यो प्याकेजले पुरा गर्न सक्छ ।’
यसैगरी दोस्रो प्याकेजको रुपम स्ट्याण्डर्ड प्याकेज रहेको छ । यो प्याकेजको प्रति स्क्वायर फिटको ३ हजार २ सय ५० रुपैयाँ लाग्ने कम्पनीले जनाएको छ । मध्यम वर्गीय मानिसलाई लक्षित गरेर यो प्याकेज ल्याइएको आचार्यले बताए । अहिले यो प्याकेजलाई धेरैले रुचाइरहेका छन् ।
अन्तिम प्याकेजको रुपमा प्रिमियम प्याकेज रहेको छ । यो प्याकेज अरु भन्दा थोरै महंगो छ । तर, यसको सविधा र गुणस्तरमा भने कुनै सम्झौता नहुने म्रिडानीको दाबी छ । ‘यो प्याकेजमा प्रति स्क्वायर फिट ४ हजार ५० रुपैयाँ लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘यो प्याकेजले ग्राहकलाई सन्तुष्ट बनाउँछ ।’
यसरी सुरु भयो निर्माण गुरु
कम्पनीका मार्केटिङ प्रमुख आचार्य पेसाले शिक्षक हुन् । उनी नेपाल कमर्श क्याम्पसमा मार्केटिङ विषय पढाउँछन् । आचार्यले काठमाडौंमा करिव तीन वर्ष आफ्नै घर बनाए । कागजी प्रक्रियाका लागि निकै हैरानी खेपे । त्यसैले उनलाई घर निर्माण गुरुको ‘न्यु स्टारअप’ आइडिया जन्मायो ।
गुरुले सुरुमा कन्सल्टेन्सीको रुपमा काम गर्यो । उनकी श्रीमती म्रिडानी वातावरण विज्ञानकी विद्यार्थीसमेत हुन् । उनलाई पनि यसप्रति रुचि भयो । वातावरणमैत्री घर कसरी बनाउने भन्ने बारे पनि उनीहरुले परामर्श दिन थाले । सल्लाह सुझाव लिन आउनेहरुले घर निर्माणका क्रममा निर्माण सामग्रीदेखि कामदारबाट भोगेको हैरानी सुनाउँथे । त्यसपछि घर निर्माण गुरुलाई कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको रुपमा विकास गरेको आचार्य बताउँछन् ।
घर निर्माण गुरुमार्फत तीन आना जग्गामा एक तले घर बनाउँदा ४५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने आचार्य बताउँछन् । यस्तै, साढे दुईतलाको घर सम्पन गर्न ७५ लाख लाग्नेछ ।
एक तले घरको ४५ लाख, दुई तलाको ७५ लाखसम्म
घर निर्माण गुरुमार्फत तीन आना जग्गामा एक तले घर बनाउँदा ४५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने आचार्य बताउँछन् । यस्तै, साढे दुईतलाको घर सम्पन गर्न ७५ लाख लाग्नेछ । ‘पहिलो तलाको तुलनामा दोस्रो तलाको खर्च कम हुन्छ,’ उनले भने, ‘पहिलो तलामा डिपिसी गर्नुपर्ने भएकाले धेरै खर्च निस्कन्छ ।’ घर निर्माण गुरुले इन्टेरियर डिजाइनिङको समेत काम गर्दै आएको छ ।
४ कोठाको एक तले पक्की घर बनाउन के–केमा कति लाग्छ खर्च ?
काठमाडौँमा अपार्टमेन्ट किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? यस्तो छ मुल्य
यी अनौठा इन्डोर प्लान्ट रोप्नुहोस् आफ्नो घरमा - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
[…] पनि…घर बनाउने सपना, ‘गुरु’ ले पार्छ साकारयसरी सजाऔँ […]
गलैँचाले बढाउनुहोस् घरको सौन्दर्यता - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
सुन्दर बनाउनुहोस् आफ्नो बेडरुमलाई - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
[…] यो पनि…घर बनाउने सपना, ‘गुरु’ ले पार्छ साकार […]
यसरी सजाउनुहोस् आफ्नो घर - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
सकारात्मक ऊर्जाका लागि यसरी सजाउनुहोस् आफ्नो बैठक कोठा - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
यसरी सजाऔँ घरलाई - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
[…] गृहको चाहना सबैको हुन्छ । घर सानो होस वा ठूलो । आफ्नै होस वा भाडाको […]
जागिर दिने धन्दामा विद्यार्थी पर्छन् फन्दामा « Mero LifeStyle
[…] किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? यस्तो छ मुल्यघर बनाउने सपना, ‘गुरु’ ले पार्छ साकारहामी सबैको […]
Rama sharma poudel
Atyantai ramro abadharana.pls provide contact details of that nirman huruf.
हिमाली जिल्ला मुगुका खाद्यन्न गोदाम रित्तिन लागेका छन्। गोदाम रित्तिन लागेसँगै स्थानीयले खाद्यान्य अभावको सामना गर्नुपर्ने आशंका गर्न थालेका छन्।
गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक स्थलमा भद्दा मजाक नगर्न निर्देशन दिएको छ। सार्वजनिक स्थलमा मजाक, ख्यालठट्टा वा मस्करीको नाममा सर्वसाधारण व्यक्तिहरूलाई शारीरिक